“Zidane waa macalinka ku haboon ee noqon kara badalka Mourinho ee kooxda Manchester United” – Saha – Gool FM
“Zidane waa macalinka ku haboon ee noqon kara badalka Mourinho ee kooxda Manchester United” – Saha
Dajiye December 24, 2018
(Manchester) 24 Dis 2018. Weeraryahankii hore kooxda Manchester United ee reer France Louis Saha ayaa xaqiijiyay in Zinedine Zidane uu yahay macalinka ku haboon ee badalka u noqon kara Jose Mourinho.
Louis Saha oo sidoo kale u soo ciyaaray kooxaha Sunderland, Fulham iyo Everton, ayaa sheegay in Zidane uu yahay macalinka ugu fiican ee leylin kara Manchester United, maadaama uu leeyahay dhamaan tilmaamaha macalinka guuleysta.
“Aniga ahaan, waxaan ka mid ahay shaqsiyaadka taageersan in Zidane uu leeliyo kooxda Manchester United, wuxuu ahaa ciyaaryahan cajiib ah, sidoo kale waa macalin si wanaagsan u yaqaana qaabka loola xiriiro ciyaartoyda, waa mid naxariis badan, ee heysta dhamaan tayada ay tahay in la ixtiraamo”.
“Zidane waa tababare garanaya sida loo dheelitiro dhanka difaaca iyo weerarka, aniga ahaan waa macalinka ugu fiican ee lagu aamini karo xiligan kooxda Manchester United”.
“Ole Gunnar Solskjær waa macalinka ku meel gaarka ah ee kooxda Manchester United, waxaana qabaa inuu doonayo inuu cadeeyo sida uu ugu qalmo inuu sii joogi karo kooxda waqtiga ugu dheer”.
“Wuxuu isku dayi doonaa inuu kalsooni ka dhaxlo kooxda gudaheeda isbuucyada soo aadan, sidaasi darteed waa inaan sugnaa si aan u aragno waxa dhaca”.
DEG DEG: Xaalada Dhaawacyada Arsenal oo ka sii dartay....+SAWIRRO
Arsenal oo beri Beec Jaban ku heli kartay Daafaca laf-dhabarka u ah Liverpool ee Virgil van Dijk balse SABAB YAAB LEH ku diiday!!!